‘मिस्टर झोले’ को झोलामा ५ दिनमा कति पर्यो ? « Ramailo छ
‘मिस्टर झोले’ को झोलामा ५ दिनमा कति पर्यो ?
गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘मिस्टर झोले’ को मंगलबारसम्म व्यापार सार्वजनिक गरिएको छ । वितरक गोविन्द शाहीका अनुसार दयाहाङ राई स्टारर फिल्मले पाँच २ करोड २२ लाख सफल भएको छ ।
फिल्मले शुक्रबार र शनिबार १ करोड १० लाख कलेक्सन गर्न सफल भयो । यसमा राजधानीबाट ७० लाख र मोफसलको ४० लाख ग्रस कलेक्सन छ । त्यस्तै आइतबार र सोमबार फिल्मले देशभरबाट ८४ लाख ग्रस बटुल्न सक्यो । यसमा उपत्यकामा ४६ लाख र बाहिरबाट ३८ लाखको कलेक्सन छ । पाँचौ अर्थात् मंगलबार फिल्मले उपत्यकाबाट १५ लाख र बाहिरबाट १३ लाख ग्रस कलेक्सन गर्दै कुल २ करोड २२ लाख पुर्याउन सफल भएको हो । विशेष शोको भिडियो हेर्नुस् :
रामबाबु गुरुङ निर्देशिशत फिल्ममा दयाहाङ राई, दीया पुन, वर्षा राउत, बुद्दी तामाङ, विजय बराल, प्रविन खतिवडा, अरुणा कार्की लगायतको अभिनय रहेको छ । सिनेमा आर्ट्स र टेकेन खड्का फिल्म प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्मित फिल्मका निर्माता टेकेन खड्का र कार्यकारी निर्मातामा रौनक विक्रम कडेल हुन् । दिया पुनसँगको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
रामबाबुकै कथा लेखन रहेको फिल्ममा निमेष श्रेष्ठको सम्पादन, कालीप्रसाद बाँस्कोटा र सुजेन कार्कीको संगीत, शैलेन्द्र डी कार्कीको छायाँकन र विक्रम स्वारको कोरियोग्राफी रहेको छ । दयाहाङसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :